Schedule : Saturday (3:00 PM - 5:30 PM)
Class Code : ICM-SM-19-01
Strategic Management ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ပြီးမြောက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း၏နည်းဗျူဟာ အဆင့်မှ အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများကို ဆိုလိုပါသည်။
ICM Single Subject Diploma in Strategic Management ဘာသာရပ်မှာ ဘာတွေသင်မှာလဲ?
Strategic Management ဘာသာရပ်တွင် လုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ပြီးမြောက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း၏နည်းဗျူဟာ အဆင့်မှ အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း များကို လေ့လာရပါမည်။ Strategic Management ၏ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လုပ်ငန်းအတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများ၊ နည်းပညာ အပြောင်းအလဲများ အပေါ်သုံးသပ်လေ့လာပြီး လုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းချက်မှတ်တိုင်များ ချမှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း၏တန်ဖိုး (Value) သတ်မှတ်ခြင်းများကို လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သတ်မှတ် ထားသော ရည်မှန်းချက်များပြည့်မှီရန်အတွက် ရေးဆွဲထားသည့် နည်းဗျူဟာများအပေါ် မှုတည်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် များနှင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ (Action Plans) ရေးဆွဲခြင်း၊ ထိုအစီအစဉ်များ အသက်ဝင်လာရန်အတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ အရင်း အမြစ်များ၊ ဌာနများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ပြီး နည်းဗျူဟာမြောက်အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းများပါ၀င်ပါသည်။
KPIs များသတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်များ (Plans) သည် သတ်မှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက်အတိုင်း မည်သည့်အခြေအနေ ရောက်ရှိသည်ကို တိုင်းတာလေ့လာပြီး ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သင့်သည့်များကို လည်းလေ့လာရပါမည်။
👤 ဘယ်သူတွေတက်ရောက်သင့်လဲ ?
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ ၊ ကုမ္ပဏီ၏ Management Level တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသော မန်နေဂျာများ လက်ထောက် မန်နေဂျာများ နှင့် Strategic Management အပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Strategic Management ဘာသာရပ်တွင် အသေးစိတ်
• Stages of Strategic Management
• Strategic Management Model
• Business Ethics & Strategic Management
• Components ofaBusiness Mission
• Nature of an External Audit
• Forecasting Tools & Techniques
• Nature of an Internal Audit
• Relationships Among Functional Areas
• Nature of Strategy Analysis & Choice
• Strategy Formulation Framework
• Politics of Strategy Choice
• Nature of Strategy Implementation
• CreatingaStrategy-Supportive Culture
• Strategy-Evaluation Framework
• Characteristics of an Evaluation System
တစ်ပတ်တစ်ရက် သင်တန်းမှာ (၅) လခွဲ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါ
Institute of Commercial Management (UK) မှ စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပါက ICM Single Subject Diploma in Strategic Management ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။